चौधरीको प्रश्नः भ्याक्सिनमा बजेट छुट्याएर सरकारले नै किन विचौलियाको चलखेल गराउँदैछ ? « GDP Nepal
चौधरीको प्रश्नः भ्याक्सिनमा बजेट छुट्याएर सरकारले नै किन विचौलियाको चलखेल गराउँदैछ ?
Published On : 26 June, 2021 9:32 am
काठमाडौं । सरकारले घरभित्र मात्रै थुनेर समस्या समाधान नहुने भएकोले भ्याक्सिनमा केन्द्रित हुन उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले तत्काल बहुमत नेपालीलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप नलगाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धरासाही हुने चेतावनी दिएका छन ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय उद्योग तथा ब्यापार बिभागको आयोजनामा “कोभिड–१९ को महामारी र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव“ बिषयक भरचुअल अन्तरकृया कार्यक्रम सहभागी दर्जनौ व्यवसायीले सरकार भ्याक्सिनमा केन्द्रित नहुनुले मुलुको अर्थतन्त्र समस्यमा जाने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योपति विनोद चौधरीले सरकार भ्याक्सिन ल्याएर लगाउनेमा केन्द्रित नहुनुले गम्भिर आशंका उत्पन्न गरेको बताए । संकटमा सरकारले अक्सिननै नपाएर मानिस मर्ने अवस्था आउनु सरकारको कमजोरी रहेको समेत बताए ।
‘भारतले नोभेम्बरभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई सवै भ्याक्सिन लगाउने घोषणा गरिसकेको तर हामी कहिले हो टुंगो छैन,’ चौधरीले भने ।
विभिन्न ठाउँमा पत्र पठाएकोमा सरकार रमाइरहेको तर भ्याक्सिन भने आउन नसकेको चौधरीले बताए । बजेट समेत ‘छुट्याइएको छ, तर विचौलिया राखेर भ्याक्सिनमा चलखेल गर्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण छ’ चौधरीले भने ।
दुई तिहाइको सरकार बन्यो भने मुलुकका सारा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम सवैमा विगतमा रहेको तर अहिले विगतमा सवैमा जनतामा एकप्रकारको भ्रम समेत वर्तमान सरकारले तोडिदिएको चौधरीले बताए ।
‘७ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्ने ९३ प्रतिशत चालु खर्च हुने परिपाटी नबदलेसम्म मुलुकले विकास गर्दैन,’चौधरीले भने ।
अहिले सरकारले कतिवटा लाइसेन्स गयो भनेर विदेशी लगानीको हिसाव गरेर बसेको तर विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज) रित्तै हुनुले पनि उद्योग कति फस्टाउनमा सरकारले भूमिका खेलेको भन्ने कुरा प्रष्ट भएको चौधरीले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महांसघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले खोप ल्याउन नसक्ने अवस्था र जनतालाई नदिएसम्म सहजता दिन सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा असहज अवस्था आउने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लकडाउनकै बीचमा सरकारले असार २५ भित्र कर तिर्नका लागि सूचना निकालेर बस्नु गलत भएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले अहिले ३० प्रतिशत उद्योग बन्द रहेको र ७० प्रतिशत चलेका उद्योग पनि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेको बताए ।
५ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएका उद्योगलाई ५ करोड पुर्नकर्जा दिएकोले लगानी अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले कोभिड १९ ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको बताए ।
नेपाललले खोप अझै लगाउन नसक्ने अवस्थामा अझै एकवर्ष समस्या आउने देखिएको बताए ।
‘राजश्वमा योगदान गर्न उद्योगलाई चलायमान गराउने एक मात्र विकल्प भ्याक्सिन हो,’अग्रवालले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीप्रकाश शरण महत अहिलेको सरकारबाट केही पनि आशा गर्ने ठाऊ नभएको बताउँदै यो सरकारको वहिर्गमनै पहिलो सर्त भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय उद्योग व्यापार विभागका सभापति चिनकाजी श्रेष्ठले कांग्रेसले यस्तो छलफल जारी राख्दै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन केन्द्रित हुने बताए । ‘व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिन्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।